Yintoni indima yekomiti yewadi? – Civics Academy
Iwadi yindawo yorhulumente wasedolophini okanye kamasipala wasekhaya, enemida ecaciswe gca. Ikomiti yewadi libhunga elinyulwe ngokwentando yesininzi elimele iimfuno zoluntu ngokubanzi nelihlangana qho phantsi kosihlalo onguceba wewadi.
Umasipala unamagunya okugqiba ukuba abe neekomiti zeewadi, yaye ukuba ugqiba ukuba makenjenjalo, kufuneka amisele iikomiti zeewadi zazo zonke iiwadi ezingaphantsi kwegunya lakhe.
Iikomiti zinokuba namalungu aya kutsho kwi-10 nanokumela iintlobo ezahlukeneyo zamaqela aneemfuno ngeemfuno. Amalungu eekomiti zeewadi anako kwakhona ukunyulwa ngokweendawo abahlala kuzo. Iikomiti zeewadi ziluqhagamshelwano phakathi kukamasipala noluntu.
likomit zeewadi zinale misebenzi iluxanduva ilandelayo
1. Kukwenza iingcaciso-ntetho ezibhaliweyo neengcebiso kwimiba ebhekisele kwezikarhulumente wasekhaya kwiiwadi zabo.
2. Lunxibelelwano phakathi kukamasipala nabantu ngokuqala kugqithwe kuceba wewadi.
3. Kukwenza ukuba uceba wewadi aphendule ekuzalisekiseni imisebenzi yabo.
4. Kukubandakanya uluntu ngokubamba iintlanganiso zarhoqo kwakunye nezinye iintlobo zokuqhagamshelana.
Ingaba zisebenza njani iikomiti zeewadi
Ikomiti yewadi kufuneka ihlangane ubuncinane iintlanganiso zibe 4 ngonyaka kuba ooceba beewadi kufuneka banike ingxelo kwiiwadi zabo qho ngekota. Iikomiti zeewadi kufuneka kwakhona zihlangane xa kuxoxwa le mibandela ilandelayo:
1. IsiSwangciso sezoPhuhliso oluDibeneyo (Integrated Development Plan)
2. INkqubo yoLawulo lweNdlela yoKusebenza (Performance Management System)
3. UHlahlo lwabiwo-mali loNyaka (Annual Budget)
4. INgxelo yoNyaka (Annual Report)
5. Imigaqo-nkqubo nemithetho kamasipala (policies and bylaws).